Usetyenziso lwekhamera ye-pixel ka-google ye-Android 7.0
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Fumana usetyenziso lwekhamera yeGoogle Pixel kwi-Nexus 6P / Nexus 5X yakho
Fumana usetyenziso lwekhamera yeGoogle Pixel kwi-Nexus 6P / Nexus 5X yakho
Ukuba ukhangele indlela yokufumana izandla zakho kwi-app entsha yeKhamera evela kuGoogle & apos; kungekudala uza kuba sisungulo lwePixel kunye nePixel XL iifowuni, unethamsanqa! Abantu abangaphezulu kwe-XDA bayifakile i-app ukuba isebenze kwizixhobo ezingama-64-bit ezisebenzisa i-Android 7.0 Nougat, okuthetha ukuba ngoku ungafumana enye yeempawu ezikhethekileyo zePixels kwi-Nexus 6P yakho okanye kwi-Nexus 5X ngoku, akukho mfuno ibalulekileyo! Ewe kunjalo, njengoko kulindelekile, awuzukufumana yonke into kuGoogle & apos, iifowuni ezintsha, kodwa uninzi lukhona, kwaye ukuba unayo i-64-bit ye-smartphone eqhuba ingxelo yokugqibela ye-Android, Awunasizathu sokungazami i-app entsha yeKhamera! Ke, masikhe sijonge into entsha, into onokuyenza, kwaye yintoni ongakwaziyo & apos; t. Khuphela amakhonkco emva kwekhefu.
Qaphela: Olu setyenziso alufaki ngaphezulu kwesoftware yekhamera kwaye lunokususwa nangaliphi na ixesha.
Ekuboneni kokuqala, akukho nto ingako itshintshileyo kuGoogle Camera 4.2, kodwa nje ukuba ungene kwi-nitty-gritty yayo, uqala ukuqaphela okuncinci, kwaye kungabi kuncinci, ukulungiswa kunye notshintsho. Siza kuqala kuqala kwezincinci, emva koko siye kwizinto ezinkulu. Ke, ukuqala ngento yokuqala ebonakalayo, iqhosha lokujonga igridi lifudukile ukusuka kwimenyu yokuseta ukuya kwisibonakaliso kwaye ngoku ivumela abasebenzisi ukuba bakhethe phakathi kweentlobo ezintathu ezahlukeneyo zegridi- 3 x 3, 4 x 4, kunye neGolden Ratio. Ibekwe phakathi kwexesha lesibali, i-HDR, kunye noseto lwefleshi, kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini, kwaye ikwakhona kwimowudi yevidiyo.
Ikhamera kaGoogle 4.2 ikwanazo nee-tweaks ezimbalwa ze-UI ezixubileyo, ezifana nokupeyinta, ubukhulu becala imenyu yoSeto emhlophe, kunye nopopayi wotshintsho olupholileyo xa uswitsha phakathi kweekhamera zangaphambili nezangasemva ezinemowudi yemeko yentaba kunye nelanga. ukugcwala.
Iindidi ezahlukeneyo zegridi ezikhoyo kwiKhamera kaGoogle 4.2
Ngoku, nezinto ezincinci zisendleleni, masikhe siqhubeke nomongo wayo. Ezinye zezinto zethu ezintsha esizithandayo kwi-app yeKhamera ehlaziyiweyo sisitshixo se-AE / AF, esenziwa kukucinezelwa ixesha elide naphi na kwindawo yokukhangela, kunye nesilayidi sesicatshulwa. Isitshixo se-AE / AF sikuvumela ukuba ugcine indawo enye ekugxilwe kuyo ngelixa uhlaziya umpu wakho, okanye uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde lube khona ngaphandle kokutshintsha useto lwangoku. Kukho & apos; s isilayidi esichazayo sokuhambisa ngesandla kulawulo olugqibeleleyo kwimizamo yakho yokufota, ekuvumela ukuba uhlengahlengise ukubonakaliswa ngelixa ususa iividiyo, ukuze iiapos zicoceke.
Imowudi yokukhiya ye-AF / AE Imenyu yoHlaziyo ehlaziyiweyo Onke amakhadi eengcebiso ngoku abonisa ifowuni yePixel
Ngelishwa, ngoku kufuneka siqhubele phambili kwizinto ezimbi-ezingasebenziyo, zeziphi izinto ezaphukileyo, kunye nokunye okunje. Okokuqala, ukuba ngasizathu sithile ubunethemba lokuba usetyenziso lweKhamera oluhlaziyiweyo luya kukuvumela ukuba urekhode iividiyo ezingama-4K nge-EIS kwi, kuya kufuneka sikuphoxe. I-EIS isasikelwe umda kwi-1080p @ 30FPS, kuba ayinanto yakwenza nesoftware, njengoko injalo nayo izixhobo zekhompyutha . Kuyafana nakwiividiyo ze-1080p kwii-FPS ezingama-60. Ngaphandle kwalonto, ekuphela kwento i & apos; s & ldquo; eyaphukileyo & rdquo; kwi-app, yindlela egqabhukileyo. Ngokudabukisayo, ukubamba iqhosha lokuvala phantsi akwenzi nto ngeli xesha, kwaye ukuba le nto ibalulekile kuwe, kungangcono ukuba ubambelele kuhlobo oludala lweKhamera kaGoogle okwangoku. Okwangoku, thina & apos; d say inike eli zibuko ukuba lizame, ligcine iintsuku ezimbalwa, okanye iveki, njengoko unokuthanda ulawulo lokuvezwa kwesikhokelo kunye ne-AE / AF. Ngaphandle koko, ungayisebenzisa ecaleni kwekhamera yesitokhwe.
Khuphela iGoogle Camera 4.2
I-nexus 6 xa ithelekiswa ne-5
Isicwangciso sovavanyo vs isicwangciso sovavanyo
I-Apple Watch GPS vs Cellular + GPS: yeyiphi inketho yeApple Watch ekulungeleyo?
Iminyaka emibini ubudala ye-Samsung Galaxy Tab A 9.7 inokuhlaziywa kwi-Android Nougat kungekudala
Eyona meko ye-9 yeNqaku leGlass kunye nezembozo onokuzifumana ngoku
I-iPhone 11 Pro vs iPhone XS vs iPhone 8: Ukudubula kwekhamera
Eyona meko iphambili ye-iPhone 5 kunye nezembozo
I-Hangouts ye-Android ngoku ikuvumela ukuba usete ukuncenceza kwesiko kunye nezandi zesaziso